'इपानमा जागिरे हाेइन, जलविद्युत् लगानीकर्ताहरू आउनुपर्छ' - UrjaKhabar 'इपानमा जागिरे हाेइन, जलविद्युत् लगानीकर्ताहरू आउनुपर्छ' - UrjaKhabar
‘इपानमा जागिरे हाेइन, जलविद्युत् लगानीकर्ताहरू आउनुपर्छ’
काठमाडौं । एक दशकदेखि ऊर्जा तथा जलविद्युत् व्यवसायमा संलग्न हुँदै आएका युवा उद्यमी हुन्, उत्तम भ्लोन लामा । करिब साढे २ सय मेगावाटबराबरका आयोजना निर्माण गरिरहेका संस्थामा उनको संलग्नता छ । बैंकिङ, निर्माण क्षेत्र र खुद्रा व्यवसायलाई समेत उनले एक साथ अगाडि बढाइरहेका छन् । अहिले उनी स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) उपाध्यक्षका दाबेदारका रूपमा उभिएका छन् ।
इपान निर्वाचनमा कृष्ण आचार्य र सूर्यप्रसाद अधिकारीले अगुवाई गरेका समूह अगाडि बढेका छन् । लामा अधिकारी समूहका हुन् । यद्यपि, अग्रजहरूको काम र भावनालाई सम्मान गर्दै युवाहरू अगाडि बढ्नुपर्ने उनको धारणा छ । युवालाई हौसला प्रदान गरिदिन पनि उनले अग्रज तथा पुराना व्यवसायीहरूसँग आग्रह गरेका छन् । यही सन्दर्भमा ऊर्जा खबरले लामासँग गरेको संक्षिप्त कुराकानी :
नयाँ कार्यसमिति चयन गर्न हुन लागेको निर्वाचनमा यहाँले पनि उमेद्वारी दिनुभएको छ । कस्ता मुद्दा लिएर अगाडि बढ्नु भएको छ ?
जलविद्युत् विकासमा संलग्न भएको करिब ८ वर्ष भयो । यसबीचमा अर्बौंको लगानी भइसकेको छ । म संलग्न कम्पनीले मात्रै साढे २ सय मेगावाटका आयोजनामा लगानी गरेका छन् । केही आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन भइसकेको छ भने केही निर्माणको अन्तिम चरणमा त केही निर्माणाधीन छन् ।
विगत लोडसेडिङको समयमा ऊर्जा विकासमा राष्ट्रिय सहमति जस्तो देखिएको थियो । यही कारण, लगानी गरेर छोटै समयमा प्रतिफल प्राप्त हुने घरजग्गा तथा पुँजीबजार जस्ता क्षेत्र हुँदा–हुँदै हामी जलविद्युत्मा लागेका हौं । यो क्षेत्रमा काम गर्दा लगानीको प्रतिफल ढिलो आउने भए पनि देश विकासमा संलग्न भएको अनुभूति हुन्छ ।
तत्कालीन क्लिन इनर्जी डेभलपमेन्ट बैंकले हाइड्रो फन्ड नामको छुट्टै कम्पनी स्थापना गर्यो । जसको मुख्य उद्देश्य नै जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्ने थियो । यही कम्पनी मार्फत म जलविद्युत् व्यवसायमा जोडिएँ ।
अब इपान निर्वाचनको कुरा गर्दा, विगतको कार्यसमितिमा हाम्रो कम्पनी सिइडिबी हाइड्रोबाट विनय भण्डारीजी हुनुहुन्थ्यो । प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष इपानमा हाम्रो संलग्नता थियो । विगतमा जलविद्युत् क्षेत्र सीमित थियो । विस्तारै लगानी फराकिलो हुँदै गएपछि समस्या पनि बढी देखिन थाले । समस्या समाधान गर्न इपानले विशेष पहल गर्नुपर्थ्याे । सामर्थ्य हिसाबले सोचेअनुसार गर्न नसकेको देखियो ।
विगतमा जे जस्ता काम भए । त्यसको समीक्षा गर्दै राम्रो टिम बनाएर इपानलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्नेमा हामी एकजुट भएका छौं । इपानमा जागिरे मानसिकताका होइन साँच्चै लगानीकर्ता आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच छ । यही सोचअनुसार काम गर्ने हाम्रो प्रण छ । हाम्रो टिमले आफ्नै खालको नीति तथा योजना अगाडि सारेको छ । यसैलाई आधार मानेर हामीले काम गर्नेछौं ।
ऊर्जा तथा जलविद्युत् क्षेत्रको विकास तथा यहाँका समस्या समाधान गर्न तपाईं र तपाईंको टिमको योजना कस्तो छ ?
यो व्यापक र देशको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो । मान्छे वा देशले त्यही बेच्छ, जुन उसँग छ । जसमा प्रतिस्पर्धा पनि छ । कतार वा अरबियन मुलुकले पेट्रोल तथा डिजेल बेच्छन् । हाम्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो, जलविद्युत् । यो क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी लगानी छ र धेरै रुचि पनि ।
लगानी सँगसँगै इपानमा आउने आकांक्षी धेरै हुनुहुन्छ । दुई वटा समूह बनेको छ । यसलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन । दुई वटा समूह भए पनि नयाँ र युवा अनुहारलाई आउनु दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ । यसअघि इपानमा अग्रजहरूले गरेका कामबाट केही सिक्दै, सुधार्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । अग्रजहरू सल्लाहाकार भएर बस्ने र युवाहरूलाई काम लगाउने वातावरण बनाएर अगाडि बढ्ने बाटो खोल्नुपर्छ ।
हाम्रो समूहले पनि झन्डै ३ हजार मेगावाटका आयोजनाको प्रतिनिधित्व गर्छ । कतिपय ती आयोजना बत्ति बलिसकेका छन् । कोही निर्माणाधीन र कतिपय अध्ययन चरणमा छन् । हामी युवामात्र होइनौं । यो क्षेत्रलाई काँध थापेर अगाडि बढाउने उत्साह बोकेर आएका सिपाही पनि हौं । हाम्रो समूहका १५ मध्ये १२ जनाले बिजुली बालिसकेका छन् ।
यसर्थ, अग्रजहरूलाई सम्मान गर्दै हामीलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुस् भनेर अनुरोध गर्ने हो । सहमतिबाट जाने हो भने कार्यसमितिमा जाने १५ सदस्य मध्ये ८–७ वा ७–८ गर्न सकिन्छ । अग्रजहरूको तर्फबाट अध्यक्ष बस्नुहुन्छ भने हाम्रो समूहलाई ८ सदस्यको जिम्मेवारी दिनुपर्यो । होइन, हामीलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिनुभएमा हामी ७ जना सहभागी हुनेछौं ।
हाम्रो (इपान) काम प्रवर्द्धकहरूलाई सहयोग गर्ने हो । यति गर्न सकियो भने अधिकांश प्रवर्द्धकहरू इपानको छाताभित्र आउनुहुनेछ । हामी प्रवर्द्धकहरूको समस्या एकद्वार प्रणालीबाट समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौं ।
अहिले इपानबाहिर सयौं प्रवर्द्धकहरू छन् । उनीहरूलाई इपानको छाताभित्र कसरी समेट्नुहुन्छ ?
मैले र मेरो समूहले यसलाई अवसर तथा चुनौतीका रूपमा लिएको छ । हामी निर्वाचित भएर गयौं भने इपानमा सबैलाई समन्वय गर्ने सहयोगी कक्ष बनाउनेछौं । जलविद्युत्मा ९ वटा मन्त्रालयसँग जोडिएर काम गर्नुपर्छ । यसको आधार ९ वटा सहयोगी कक्ष बनाइनेछ ।
केन्द्रीय सहयोगी कक्ष, ९ वटा मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने र आवश्यकता अनुसार अन्य सहयोग युनिट पनि बनाइनेछ । हामीले हाम्रा प्रवर्द्धक साथीहरूको समस्या, गुनासो सुन्न वा सहयोग गर्न व्यवस्थित सचिवालय बनाउँछौं । यसले हरेक प्रवर्द्धकको समस्या वा गुनासो सुन्नेछ र समाधानका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयसँग पहल गर्नेछ । प्रवर्द्धक आफैं धाएर दुःख पाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनेछ ।
निजी क्षेत्रले सरकारबाट पाउने सेवा–सुविधा लिन पर्याप्त लबिङ गर्नुपर्नेछ । यसमा यहाँहरूले कस्ता योजना बनाउनुभएको छ ?
यो क्षेत्र ठूलो भएकाले यसका समस्या पनि धेरै छन् । हाम्रो जस्तो कम विकसित देशको सरकारका आफ्नै समस्या छन् । सरकारले यसअघि घोषणा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर भनेर निजी क्षेत्रले बारम्बार किन भनिरहनुपरेको छ त ?
यदि, निजी क्षेत्रले राम्रो आम्दानी गरिरहेको थियो भने त्यसो भन्ने थिएन कि ! हिजो ७–८ प्रतिशत ब्याजमा वित्तीय व्यवस्थापन भयो । आज त्यो ब्याज १४–१५ प्रतिशत पुग्यो । यसो हुँदा हामी अप्ठ्यारोमा छौं । समस्या भयो भनेर सरकारसँग भनिरहेको हो ।
अब लबिङ गर्ने सन्दर्भमा, आजको दिनमा ७ प्रतिशतमा ऋण उपलब्ध गराउने हो भने सरकारले गरेका बाचा पूरा नगर्दा पनि प्रवर्द्धकहरू मानछन् । गर्ने कसरी भन्ने प्रश्न उठ्छ । एक साताअघि मात्र सरकारले विश्व बैंकबाट सडक निर्माणका लागि ४५ अर्ब रुपैयाँ ३२ वर्षका लागि ऋण लिएको छ । त्यसरी नै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ग्रिन फन्ड वा क्लिन इनर्जी फन्ड पाइन्छ । त्यसको ब्याजदर १ प्रतिशत भन्दा कम हुन्छ ।
त्यसको हेजिङ लागत साढे ४ प्रतिशत राख्ने हो भने साढे ५ वा ६ प्रतिशत पुग्छ । त्यसमा सरकारले १ प्रतिशत आफ्नो फाइदा राख्ने हो भने ७ प्रतिशतको हाराहारीमा हामीले ऋण पाउन सक्ने अवस्था हुन्छ । यदि, प्रवर्द्धकले लगानी गरेको पैसा ६–७ प्रतिशत ब्याजमा पाउने हो भने विगतमा सरकारले घोषणा गरेका माग छोड्न पनि सकिन्छ ।
लबिङ गर्ने सन्दर्भमा, सरकारले आफ्नो विश्वसनीयता जोगाइराख्न पनि बोलेका कुरा पूरा गर्नुपर्छ । यदि, हाम्रो समूह इपानमा गयो भने हामीले एउटा विज्ञको समूह बनाउँछौं । यसमा पूर्वअध्यक्ष, पूर्वसचिव तथा जलस्रोत क्षेत्रका विशेषज्ञ रहनुहुनेछ । उहाँहरूको परामर्श र सहयोगका आधारमा हामी अगाडि बढ्नेछौं ।
सरकारले घोषणा गरेका सुविधा पाउन हाम्रा पनि केही कमजोरी थिए कि ! थिएनन् भने किन पाउन सकिएन त भन्ने समीक्षा गर्दै सम्बन्धित निकायसम्म आवाज पुर्याउने पहल हुनेछ । त्यसमा सरकारलाई घच्घच्याउने, दबाद दिने र निरन्तर त्यसलाई पछ्याउने काम हुनेछ ।
हाम्रो अहिलेको टिममा पनि ३ जना साथीहरू हुनुहुन्छ, जो योभन्दा अगाडि सरकारले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गराउन निरन्तर दबाब दिइरहनुभएको छ । तिनै मध्ये एक जनाले इपानको नेतृत्व गर्नुहुन्छ । हामीले उहाँलाई पूर्ण रूपमा सहयोग गर्नेर्छौं ।
बैंक ब्याजको कुरा आइरहँदा प्रवर्द्धकहरूले पनि बैंकहरू तथा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग आवश्यक सहयोगको पहल गरेका छन् ?
हामी बैंकर संघ नेपाल तथा राष्ट्र बैंकसँग निरन्तर छलफलमा छौं । यही छलफलको परिणाम नै हो, हालै राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिमा जलविद्युत्मा अनिवार्य १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था । यो व्यवस्था नभएको भए अहिले पाइपलाइनमा रहेका आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुने थियो ।
मौद्रिक नीतिले केही सजिलो बनाइदिएको छ । अब बैंकहरूले थप ८०/९० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने वातावरण बनेको छ । अहिले ऊर्जा क्षेत्रमा बैंकहरूको लगानी करिब ५ प्रतिशत छ । ५ प्रतिशत थपिँदा अवस्था सजिलो बन्दै जानेछ ।
अर्को, क्लिन इनर्जी बन्ड (ऊर्जा बन्ड) जारी गर्न सक्ने व्यवस्था ल्याएको छ । स्ट्यान्र्डर्ड चार्टर्ड तथा नेपाल एसबिआई बैंक जसले जलविद्युत्मा कम लगानी गरेका छन् तिनलाई बाध्य बनाउनेछ । हामी कहाँ पहिल्यै नै निक्षेपको ब्याज महँगो छ । निक्षेप बढाएर मात्र ब्याज घटाउन सक्ने अवस्था छैन । यसमा सरकार र राष्ट्र बैंकले पहल गर्नुपर्छ । विदेशी फन्ड जो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उपलब्ध छ, त्यो ल्याउन सकियो भने ब्याज सस्तो हुन सक्छ ।
तपाईंको टिमले संस्था हाँक्यो भने अबको तीन वर्षमा इपान कस्तो होला ?
म त व्यवसाय गर्ने, सपना देख्ने मान्छे । इपानलाई हेरेर मैले धेरै सपना देखेको छु । हाम्रो टिमले संस्था हाक्यो भने ७–८ सय सदस्य भएको इपान हुनेछ । हाइड्रो एक्सिलेन्ट अवार्ड आयोजना गरिरहेको होला । जलविद्युत् विकासमा ५–७ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिन सक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ ।
देशबाट कम्तीमा हजार–पन्ध्र सय मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने वातावरण बन्न सक्छ । साथै, इपान वा निजी क्षेत्रको आफ्नै प्रसारण लाइन होस्, जसबाट भारत तथा बंगलादेशमा बिजुली बेच्ने आधार बनोस् । हामी यी सपनालाई आधार मानेर काम गर्नेछौं ।
हिजो जे जस्ता आयोजना बने । प्रवद्र्धकले पनि राम्रा आयोजना छनोट गर्न सकेनन् होला । तर, अब जति आयोजना निर्माण हुँदैछन्, ती साच्चिकै राम्रा छन् । हिजो जे जस्तो गल्ती भयो अब त्यता फर्किने होइन । अब वास्तविक आयोजना लिएर वास्तविक प्रवर्द्धकहरू आउँदैछन् । आइरहेका छन् ।
यसैले, आउँदो तीन वर्षपछि अग्रज तथा इपान सदस्यहरूले फेरि एक पटक नेतृत्वको जिम्मेवारी हामीलाई दिने गरी हामी काम गर्नेछौं । हामी ७–८ सय प्रवर्द्धक भएको संस्था बनाउँछौं । स्वदेशी मात्र नभई विदेशी लगानी भित्र्याउन पनि हामी उतिकै पहल गर्नेछौं । यसमा सरकार तथा अर्थ मन्त्रालयको सहयोग हुनुपर्छ । हामी विदेशबाट ऋणमात्र होइन स्वपुँजी समेत ल्याउने पहल गर्छौं । योजना अनुसार काम गरियो भने लक्षित काम गर्न सकिन्छ भन्नेमा हाम्रो समूह विश्वस्त छ ।